Wednesday August 12, 2020 - 10:48:45 in Wararka by Mogadishu Times
Magacyada Guddiga loo xil saaray baarista dhacdadii xabsiga dhexe Mahdi Maxamed Guuleed "Khadar" Ku-simaha R/Wasaaraha XJFS ayaa mag acaabay Guddiga Baarista Dha cdada Shaqaaqadii 10/08/2020 ka Dhacday Xabsiga Dhexe. 1- Md. Xasan
Magacyada Guddiga loo xil saaray baarista dhacdadii xabsiga dhexe Mahdi Maxamed Guuleed "Khadar" Ku-simaha R/Wasaaraha XJFS ayaa mag acaabay Guddiga Baarista Dha cdada Shaqaaqadii 10/08/2020 ka Dhacday Xabsiga Dhexe. 1- Md. Xasan Xuseen Xa aji​ Wasiirka Cadaaladda​ Guddoomiye 2-Dr.Sulaymaan Max'ed Max'ud​ Xeer-ilaaliy aha Guud ee Qaranka​ Xubin 3-S/Gaas Cabdi Xasan Maxamed ​Taliyaha Cii danka Booliska​ Xubin 4- S/Guuto Mahad C/raxmaan Aadan​Taliyaha Ciidanka Asluubta​ Xubin 5-S/Guuto C/hi Buulle Kameey ​Xeer-ilaaliyaha Guud ee Maxkamadda Ciidamada​ Xubin 6-G/Sare Guuleed Sh. Xuseen Aadan​ Taliyaha Hoggaanka Baarista Dambiyada (C.I.D.)​Xubin Xilka iyo Waajibaadka Guddiga: 1- Waxa xubnaha Guddiga sare ku xusan la fa rayaa in ay deg deg u hawl-galaan, una guda-galaan barista dhacdadaas, kana keenaan gu b-gaar dhammays-tiran sida ugu dhaqsaha ba dan. 2-Guddiga waxa la farayaa iyaga oo gudanaya waajibaadkooda inay si joogta ula socod-siiy aan Ku-simaha R/W barista ay wadaan. 3-In hawshan Baarista lagu soo gaba-gabeeyo muddo Toban (10) casho gudahood ah oo ka bilaabanaysa taariikhda warqaddan. 4-Guddigan hawshiisu waxa ay ku ekaan doon taa marka baaristu soo gaba-gabowdo. 5-Guddigan waxa uu magacaaban karaa Gud di-hoosaad Farsamo oo u fududeeya waajiba adka loo igmaday.
Shirkadda DP-world oo isku aShalayy inay shaqo culus ka qabatay dekeda Berbera
Shirkadda DP-world ayaa sheegtay inay dha meystirtay 400mitir oo qeyb ballaarinta dhi smaha dekeda M/Berbera ee Somaliland, sida ay ku shaacisay barteeda ay kuleedahay Twitt erka. DP-world waxay tilmaamtay in dhi smahaan cusub uu qeyb ka qaadan doono ko rorka awooda marinka dekeda, isla markaana la gaaridoono in ay dekeda xamili karto culays dhan 500,000 Konteenar sanadkiiba.
Waxay kaloo sheegtay inay sii xoojin doonto M/Berbera si ay u noqoto xarun ganacsi oo weyn oo gobolka Geeska Afrika ka adeegato.
Shirkadda DP-world ayaa si rasmi ah ula wareegtay maamulka dekedda Berbera taari ikhdu markay ahayd 11 Maajo sanadkii 2017.
Muddo 25 sano ayay ka saxiixatay So maliland inay maamusho dekeda Berbera, wax ayna taas bedelkeeda bixindoonta boqolaal Mil lion oo dollar oo ay dekeda ku maalgalind oonto.
Madaxweynaha Galmudug oo kulan xasaasi ah la qaatay C/Kariim Guuleed
Madaxweynaha D/G/Galmudug Axmed Ca bdi Kaariye (Qoor Qoor) oo safar ku jooga dal ka Turkiga ayaa wa xaa uu halkaasi ku la kul may siyaa siyiin uu kamid yahay Madaxweynihii hore ee Gal mudug Cabdi Kar iim Xuse en Guuleed. Kulanka ayaa labada mas’uul wa xaa ay uga wada hadleen xaalada siyaasaadeed ee dalka gaar ahaan dhacdoo yinkii ugu dambeeyay, iyada oo Madaxweynihii hore ee Galmudug uu Madaxweyne Qoor Qoor ku bogaadiyay howlaha uu ka wada degaann ada Galmudug.
"Waxaan Magaaladda Istanbul ee wadanka Turkiga ku kulamay Madaxweynaha Galmdug, Md.Qoor Qoor, waxaana ka wada-hadalnay xa aladdihii ugu dambeeyay ee dalka iyo arrima ha hortabinta leh. Sidoo kale madaxweyne Qo or Qoor waxaan ku boggaadiyay howlihii wa naagsanaa ee uu muddada kooban ka qabtay deegaannada Galmudug, anigoo ku dhiiri-gal iyay in lasii 2jibaaro ayuu yiri” Md. Guuleed.
Sidoo kale C/Kariim Guuleed waxaa uu she egay in Galmudug ay hadda udub dhexaad u tahay siyaasadda kala guurka ah ee Soomaal iya,isla markaana isha lagu wada haayo shirka Dhuusamareeb Saddex.
Ugu dambeyn Madaxweynihii hore ee Gal mudug & Madaxweyne Qoor Qoor waxaa ay isla soo qaadeen inuu shirka Dhuusamareeb xi lligiisa ku qabsoomo iyo inuu dhexda u xirto in ey kasoo baxaan go,aamo Soomaalidu raali ka wada tahay oo jidka u xaara iney doorashadu noqoto mid lagu wada qanacsan yahay oo xili geeddana ku dhacda.
Madaxweynaha Galmudug ayaa la filayaa in maalmaha soo socda uu dib ugu soo laabto dalka,iyada oo la filayo in 15-ka Bishaan ay M/dhuusamareeb kulan ku yeeshaan Madaxda Dowladda & Dowlad Goboleedyada.
Ilhan Cumar ayaa ku guuleysatay doora sho ay xisbigeeda dhexdiisa ka gashay, taa soo loogu tartamayay kursiga xildhibaanimada Aqalka Wakiillada ee de gmo ka mid ah gobo lka Minnesota.
Tartanka doorashadan oo si weyn ula tart amay Antone Mel ton-Meaux iyo mu sharaxiin kale ay ay Ilhan ka gaar tay guul weyn.
Guusha kadib ayay Ilhan Cumar boggeeda Twitterka waxa ay ku sheegtay in abaabul we yn loo galay sidii kursigeeda looga guuleysan lahaa.
"Gudaha Minnesota, mar kasta waxaan ogn ahay in dadka is abaabulay ay ka adkaanaya an lacagta la abaabulay. Caawana, dhaqdhaq aaqeennu guul kaliya ma uusan soo hoyinin. Waxaan kasbannay maamul isbaddal keena ya. Iyadoo ay jireen dadaallo ay dad gobolka ka baxsan ugu jireen inay guul darro nagu dha cdo, mar kale ayaan taariikh dhignay. Iyadoo ay jireen weerarro nagu socday, taageeradeen nu wey sii korortay”.
4-tii sano ee lasoo dhaafay waxay Ilhaan si weyn uga dhex muuqatay siyaasadda Mareyk anka, iyadoo codkeeda ku muujineysay sida ay uga soo horjeeddo siyaasadaha maamulka madaxweyne Donald Trump.
Waxay noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya kasoo jeedda ee heerkaas ga adha, sidoo kalena waxay ka mid tahay hawe enka muslimiinta ah ee markii ugu horreysay ku biiray Congress-ka Maraykanka.
Wax ka ogoow Kulanka Maanta ee Golaha Shacabka waxa looga hadalyo
Xildhibaanada golaha shacabka ee Baarlamaanka
Federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in Maanta oo Arbaco ah ay dooda seddexaad ka yeeshaam Hindise Sharciyeedka Qareennada Soomaaliyeed.
Xildhibaannada ayaa sida loogu soo diray fariinta balaminta, waxaana kulanka golaha shacabka uu a jandahu yahay akhrinta Seddexaad ee Hindise sharciyeedka Qareennada Soomaaliyeed, iyagoo ku yeelan doono xarunta ku meel gaarka ah ee Villa Hargeysa.
Sidoo kale waxaa ajandaha ka mid ah Akhrinta warbixinta guddiga Dastuurka ee barlamaanka federaalka Soomaaliya.
Xildhibaannada Baarlamaanka 10aad oo waqtiga xilheyntooda geb-gabo yahay ayaa waxaa horyaalla Shaqooyin dhowr ah, iyada oo dhawaan Guddoomiyaha Golaha uu ku baaqay in la dardar geliyo Shaqooyinka Baarlamaanka.
Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo la oga ad ay inuu ka baxsaday Xabsiga Dhexe
Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo muddo 10 sano lagu xukumay ayaa la ogaaday inuu Dorraad ka baxsaday Xabsiga dhexe, ka dib dagaalkii sababay dhimasho iyo dhaawac ee Dorraad ka dhacday Xabsiga Dhexe.
Warar laga helay Saraakiisha Amniga ayaa sheegaya in Mubaarak Ibraahim Iidle uu Dorraad la baxsaday Xabsiga, intii uu socday iska hor imaadka.
Mubaarak ayaa ahaa Howlwadeen ka tirsan Al-Shabaab, waxaana sanadkii 2014 lagu xuk umay 10 sano oo xarig ah.
Ninkan ayaa markii uu sii baxsanayay labo qof ku dilay banaanka Xabsiga dhexe. Iska hor imaadkii Dorraad ka dhacay gudaha Xabsiga Dhe xe ayaa waxaa ku dhintay illaa 15 maxbuus oo ka mid ahaa dableydii dagaala meysay iyo 4 askari, sidoo kale 10 lale ayaa dhaawacantay oo 7 ka mid ah maxaabiis ahaa.
DFS ayaa Guddi u saartay inay baaritaan ku sameeyaan dhacdadaas iyo qaabkii maxaabi ista ugu suura gashay inay hub gacanta ku dhi gaan kaddibna ay muddo saacado ah ka dag aalamaan gudaha xabsiga
Taliska Ciidanka Asluubta oo Shaaciy ay Tirada Dadkii Ku Dhintay Weerarkii Xabsiga Dhexe.
Afhayeenka ciidanka Asluubta Soomaa liyeed G/le Sare Cabdiqani Maxamed Khalaf oo Shalay shir jaraa’id ku qa btay gudaha xabsiga dhexe ay aa sheegay in 15-ka maxaabiis ah ay ku geeriyoodeen weerar kii Dorraad ka dhacay gudaha xabsi dhexe iyadoo sidoo kale afar askari oo ka tirsanaa ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ay ku geeriyoodeen.
G/le Cabdiqani ayaa sidoo kale sheegay in ay ku dhaawacmeen ilaa iyo todobo ruux oo ka mid maxaabiista iyo halka askari ka tirsan ciidanka Asluubta.
"Waxaa ku geeriyooday shan iyo toban ka mid ah maxaabiistii xabsiga dhexe iyo askar ka tirsan ciidanka Asluubta waxaana socdo baaritaanno dheeraad oo ku salaysan dhac dadaasi waana la wadaagi doonaan bul shada Soomaaliyeed waxa soo kordho ayuu yiri Gashaanle Cabdiqani Maxamed qalaf.
Afhayeenka ciidanka Asluubta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in hada ay xaal ada caadi tahay isla markaana ay socdaan wali baaritaanno la xririiri sida ay ku suura gashay inay maxaabiista ay helaan hub.
Madaxweynaha Puntland oo si weyn loogu soo dhaweeyay Jabuuti
Madaxweynaha maamulka Puntland Md.Siciid Cabdullaahi Deni iyo wafdi uu hog gaaminayo ayaa siweyn loogu soo dhowe eyay magaaladda Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa gar oonka diyaaradaha ee caasimadda Jabuuti kusoo dhow eeyay, Wasiirka arrimaha dib adda ee Jabuuti Mudane Maxamuud Cali Yuusuf, Wasiirka gaadiidka Mudane Muuse Maxamed Axmed, Guddoomiyaha marsooy inka iyo aagga ganacsiga xorta ah Mudane Abuubakar Cumar Xadi iyo masuuliyiin kale.
Safarka Madaxweynaha maamulka Pun tland Md.Siciid C/hi Deni oo qaadan doona maalmo kooban, wuxuu ku saabsanyahay xoojinta iskaashiga Puntland iyo Jabuuti, si da dhinacyada amniga, ganacsiga iyo hour marka .
Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir” Habeen hore Al-Shabaab ayaa hub loo galiyay Xab siga dhexe ee Xamar”
Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdira xmaan Cabdishakuur Warsame oo Shir jar aa’id ku qabtay Muqdisho ayaa ku eede eyay dowladda dhexe ee Soomaaliya in ay ku fashilantay dhanka Ammaanka. Waxaa uu sheegay in dagaalkii Habeen hore ka dha cay Xabsiga dhexe ee Muqdisho uu tusaale u yahay xaaladda Amni dalka uu wajahaayo, islamarkaana qorshe gaar ah laga lahaa.
Hoggaamiyaha ayaa sheegay in Daga alkii Habeen hore ka dhacay Xabsiga dhexe uu ahaa mid lagu fakinayay Xubno Al-shab aab ah Waxa uuna ku eedeey ay hay’adda Nabad Sugidda Soomaaliya.
"Habeen hore Al-Shabaab ayaa hub loo galiyay Xabsiga dhexe ee Xamar, waana qorsho Nabad Sug idda ka dambeyso madaama ay ku Milan yih iin ragga ka tirsan Al-Shabaab”.
Waxaa uu intaasi kusii daray ” R/wasaa raha soo socda waxyaabaha laga su gayo waxaa ka mid ah in uu xisaabtamo Tal iska Fasahaadsan ee Nabad Sugidda ee hogga an xumada la daala dhacayo, R/wasaare la’ aanta dalka, waxay keentay in la boobo han tidii iyo jagooyinkii dowladda”
Xildhibaan Sacdiyo"Dowlad aan Bakaa ro ka talin sidee doorasho qof iyo cod ku qabanaysaa”
Xildhibaan Sacdiyo Salaad oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa ku ee deeysay Madaxweynaha Soomaaliya Max amed C/hi Farmaajo in uusan la socon xaal adda ay ku sugan yihiin dadka Soomaaliy eed.
Waxa ay sheegtay in amni darada ka jirta dalka ay siyaaday Saddex sano ee lasoo dhaafay, islamarkaana aysan so con karin go’aanka Madaxweyna ha uu ku doonaayo in doorasho qof iyo cod ah Soomaaliya ay u ga dhacdo.
Waxay tusaale u soo qaadatay M/ Muq disho oo dowladda taliso in shaqaallaha do wladda iyo Mas’uuliyiinta aysan tagi karin qeybo ka mid ah cabsi ay ka qabaan Dhan ka Ammaanka.
"Bakaaraha ayaan tagay anoo wejiga du ubtay ehelki way aragagaxeen maxaa hal kaan ku keenay? Dowlad aan Bakaaro ka tal in sidee doorasho qof iyo cod ku qabanay saa?” ayay tiri Xildhibaan Sacdiyo.
Ugu dambeyntii waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in go’aan mideysan oo ku aa dan nooca doorashada in lagu gaari do ono Shirka Dhuusamareeb 3 ee maalmaha soo socda ka furmi doona Dhuusamareeb xigasho:jowhar.com.
Maalintii 1aad oo dadkii laga baar ay Covid 19 dhammaan laga waayay Somaliya
Wasaaradda Caafimaadka dowladda Sooma aliya ayaa sheegtay in dhammaan dadkii laga baaray Cudurka corona virus maa lintii ugu dambeysay laga waayay, isla markaana natiijada baaritaanda ay noqotoy 0.
Warbixin kasoo baxda Wasa aradda Caaf imaadka ayaa lagu sheegay in guud ahaan tiradda dhimasha dda ay gaartay 93 ruux tan iyo markii Cudurka corona virus uu ka bilo wday Soo maaliya.Warbixinta Wasaar ada Caafimaa dka ayaa siddaan u qorneyd.
11 Aug 2020: Warbixinta COVID-19 ee Soo maaliya.
> Laga Helay: 0
> Tirada Guud Laga Helay: 3,227
> Bogsashada Guud: 1,728
> Dhimashada Guud: 93
Guddiga Amniga & Arrimaha Gudaha Baa rlamaanka oo kulan la qaatay Agaasima ha Socdaalka
Guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha shacabka oo kulan la yeeshay Ag aasimaha Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiya dda Col. Maxamed Aadan Jimc aale (Koofi).
Kulanka oo ka dhacay xarr unta Villa Hargeysa ayaa ajand ihiisu ahaa katashiga Sharciga Socdaalka ee horyaal golaha shacabka.
Agaasimaha hay’adda socdaalka iyo Jinsiya dda Maxamed Aadan Jimcaale (Koofi) ayaa guddiga sharaaxaad ka siiyay ahmiyadda uu leeyahay sharciga Socdaalka.
Xubnaha guddiga ayaa sidoo kale waxa ay agaasimaha weydiiyeen su’aalo la xarri iro sharciga Socdaalka dalka.
Ku simaha guddoomiyaha ahna guddoomiye ku xigeenka guddiga arrimaha Gudaha iyo amniga Xildhibaan Maxamed Cabdulle faar ax (Geesey) ayaa uga mahadceliyay agaasi maha hay’adda socdaalka iyo Jinsiyadda Col.Maxamed Aadan Jimcaale (Koofi) shar axaada uu guddiga ka siiyay sharciga Socda alka.
Maxaa ka jira inuu is-casilay guddoomiya ha baarlamaanka HirShabelle?
Guddoomiyaha Baarlamaanka D/G/ HirSh abelle, Sh.Cismaan Barre Maxamed ayaa ka hadlay warar laga faafi yey oo sheegayey inu u is-casi lay, ka dib war qor aal ah